Nkwakọ ngwaahịa nkuchi anya nke China dị nro ejiri aka mee 25mm 3d mink eyelash factory na ndị na -emepụta | Weiti
Nkwa nkuchi anya omenala siri ike ejiri aka mee 25mm 3d mink eyelash
1, ọkwa kacha elu 100% ezigbo mink fur
2, ejiri aka rụọ ọrụ iji hụ na kacha mma
Lashes ogologo nke 25, 25 mm
4, Reusable na ogologo oge ruo ugboro 25-30
Ogologo & Ọbara & Fluffy
√ Jiri nku anya ụgha mee ka anya gị dịkwuo mma
Dị fechaa ma na-ejigharị ya, ihe ejiri aka mee, lashes na-enweghị obi ọjọọ zuru oke maka oge ọ bụla na ọdịdị anya; ha ga-agbakwunye olu, omimi na nkọwapụta maka nsonaazụ na-adịte aka, na-egosi nkwụsị.
√ Eji aka mee, zuru oke
Mkpuchi nku anya 25mm mink niile bụ nke ejiri aka mee, anyị na-eleba anya na nke kacha mma, ka curvature na curl nke nku anya bụrụ eke. Nku anya ụgha anyị na -agwakọta nku anya gị nke ọma, na -abawanye ogologo na olu, wee mepụta ọmarịcha anya. Emebere iji kwalite ịma mma na agwa gị.
√ Reusable na ogologo oge
Ọ bụ ezie na ọtụtụ nku anya mink adịgboroja na -enye gị ohere ịmegharị ihe ruru ugboro iri, a na -eji nlezianya debe nku anya ụgha 25mm anyị ma nwee ike iji ya ogologo oge, ugboro 30 iji ya, na -enweghị ọmarịcha ha.
√ Ọ dị nro ma dịkwa mma iyi
Anya nku anya mink anyị na-ele anya bụ nke ejiri akwa owu mee, dị mfe iji, dị nro na eke iji metụ aka, na-ebelata ahụ erughị ala nke iyi nku anya ụgha.
Site na 100% Siberian Mink na afọ kacha mma site na zoos na-enweghị ohere ma megharịa ya n'oge oge mwụfu, lashes anyị na-enye nhọrọ kachasị nke ezigbo Mink Lashes. Site n'iji aji mink aji dị elu, lashes mink anyị dị mma ma maa mma, mana ọ dị nro ma dịkwa aghụghọ. Anyị na -enye nnukwu mpịachi, ogologo, ogologo na ogologo oge mink fur lashes kwesịrị ekwesị ma dị mkpa maka emume ọ bụla, dị ka etemeete kwa ụbọchị, oriri, wdg.
Ike ma ọ dịghị mfe ịjụ oyi
Nkwakọ ngwaahịa mara mma na akara omenala
Ụdị dị iche iche ejikerela
Ntughari akara ngosi ntutu anya:
1, Maka ngwugwu ntutu anya dị njikere, anyị na -eji usoro ibipụta UV mgbe niile
Mbipụta UV bụ usoro mbipụta nke na -eji ọkụ ultraviolet iji kpoo ma gwọọ inks. Ọ dị mkpa ijikọ ink nke nwere ihe na -ese foto na oriọna ọkụ UV.
2, Maka nkwakọ ntutu anya ahaziri iche, anyị na -akwado ụzọ obibi akwụkwọ dị iche iche
Ahaziri nkeonwe ahaziri na nkwakọ ngwaahịa, anyị na -akwado ibipụta ihuenyo silk, mbipụta UV, stamping ọkụ na ihe ndị ọzọ. Naanị ị ga -agwa anyị mmetụta ị chọrọ, mgbe ahụ anyị nwere ike ime dịka ihe ị chọrọ.
Okpomọkụ zọ Printing
Kedu otu esi etinye lashes ụgha?
Wepu nku anya ụgha nke ịchọrọ iyi n'ime igbe ahụ wee debe igbe maka nchekwa dị mfe mgbe ejiri ya.
Jiri igwe anya nku anya iji wepu nku anya ụgha na tray.
Tụọ lashes na ntọala nke ahịrị adịghị mma.
Nke gara aga: Igbe igbe ahaziri onwe ya nke ukwuu 25mm nku anya mink
Osote: Ndenye aha nzuzo nke 100% Onye na -ere nku anya 3D ejiri aka mee nke ejiri aka mee
100% mink nku anya
25 Mm Mink nku anya
25mm nku anya
25mm Mink nku anya
Anya nku anya na -acha uhie uhie
Emeputa N'ogbe ARIEL Style 25mm 3d Mink ...
China Factory Cheap N'ogbe lashes OEM Ụgha ...
China Factory N'ogbe 3d lashes Cheap Natural ...
YOLANDA Style Nnukwu ejiri aka mee akwa mink warara 2 ...
Ndị na -ere ahịa adịghị mma Omenala Label Nnukwu 25mm 3d ...
Super maa mma 100% ejiri mee 3D 25mm Agba Min ...
Anya anya, eyeliner, egbugbere ọnụ, mink lashes, Ndị na -ere ntutu anya, Mgbatị ntutu anya,